crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> 24 March: Maalinta Caalamiga ee Qaaxada | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka March 25, 2017	0 385 Views
Muqdisho (Himilonews) – Maalinta Caalamiga ah ee Qaaxada ama TB-da, waxaa la xusaa 24 March sanad kasta si loo fududeeyo baahinta wacyiga iyo baraarugga la xiriira cudurka; iyada oo la qaadayo habab hal-beeg u noqon kara kahortagga iyo xad-u-yeelistiisa.
Xus sanadeedkan ayaa loogu dabaal-degay asteynta taariikhdeed oo ku beegan sanadkii 1882 markii dr. Robert Koch uu ku dhawaaqay bacteriyada Mycobacterium tuberculosis ee sababta Qaaxada ama TB-da. Hal-ku-dhagga sanadkan ee Maalinta Caalamiga ah ee Qaaxada waxaa la isla qaatay: “Wadajir halagu idleeyo TB-da.”
Waxaa dhici karta inaad inaad qabtid cudurkan oo hadana aadan ogeyn. Marka loo eego xogaha la ururiyay, in ku dhow 2.3 bilyan oo qof oo dunida ku nool ayaa qaba Qaaxada, hayeeshe in badan waxaa dhacda inaysan ogaal u laheyn. Iyada oo loo eegayo xaaladaha qaar sida latent tuberculosis,qofka la nool cudurkan waxaa laga yaabaa inuusan iska arkin calaamado halis ah balse ku jira jirkiisa.
Badi cudurkani wuxuu ka jiraa dalalka soo koraya gaar ahaan Afrikada Hodanka ah, Aasiya, Latin America iyo goballada Ruushka. Inta ugu dhow dhimasho ahaan ayaa ah 1.5 milyan oo qof inay u geeriyoodaan sanad kasta. Qaaxada waxaa la ogaaday inay aad ugu badan tahay gabaadka iyo hoyga ay ku jiraan dadka dibjirka, maxaabiista, isbitaallada, qaxootiga iyo wixii soo raaca.
In kasta oo caadiyan Qaaxadu ay saameyso sanbabada, hadana xubnaha kale ee jirka sida maskaxda iyo kilyaha ayay saameyn kartaa.
Laanta u qaabilsan caafimaadka QM ee WHO waxay sheegtay in isku darka cudurrada AIDS-ka, Duumada iyo Qaaxada ay sanad kasta u dhintaan 6 milyan oo qof. Ku dhawaad boqol iyo konton kun oo qof ayaa u dhinta Qaaxada bil walba.
Qaaxadu sanad kasta waxay kor u kaceysaa 1% gudaha qaaradda Afrika sababo la xiriira la’aanta taakuleyn iyo wacyi-gelintii loo baahnaa. Dadaallada ka jira meelaha kale ee ka baxan qaaradda, waxay caawisay inay xakameeyaan karantiilka dadka la dhiban.
Ugu badnaan 9 milyan oo kiisas Qaaxada la xiriira ah ayaa la diiwaan-geliyay sanadkii 2004. 80% kamid ah waxaa laga calaamadeeyey 22 wadan.
Previous: Karni Mata: Macbadka Doolliyada – Jiirka
Next: Nolosha ninka cidiyihiisa tarminayay muddo 35 ah
Aabbe Xabsi u gelaya dhanbaal ku socday wiilkiisa oo uu amar la’aantiisa furay!